Torolàlana momba ny fahasalamana COVID-19 vaovao ho an'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Entebbe Oganda
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Torolàlana momba ny fahasalamana COVID-19 vaovao ho an'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Entebbe Oganda
Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Oganda
Taorian'ny nanombohan'ny laboratoara fitiliana COVID-19 tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Entebbe nataon'ny Filoha YK Museveni tamin'ny 22 Oktobra 2021, dia namoaka toromarika nanomboka ny 27 Oktobra 2021 ny Governemantan'ny Repoblikan'i Ogandà, mandra-pampandrenesana bebe kokoa momba ny fepetra ara-pahasalamana COVID-19 ao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Entebbe.
Ireo mpandeha tonga ao amin'ny Entebbe International dia iharan'ny fitsapana COVID-19 na inona na inona niaviany na toerana fanaovana vaksiny.
Hafindra any amin'ny toeram-pitsaboana ireo mpandeha izay manao fitiliana tsara.
Ireo mpandeha izay nanao vaksiny COVID-19 ary manana taratasy fanamarinana dia tsy maintsy mbola manolotra taratasy fanamarinana fitiliana PCR COVID-19 ratsy nalaina tao anatin'ny 72 ora niondranana.
The torolalana manomboka amin'ny 27 Oktobra 2021, mandra-pivoakan'ny fampandrenesana fanampiny amin'ny alàlan'ny fampandrenesana Manampahefana momba ny sidina sivily Uganda, Sampan-draharahan'ny Fampahalalam-baovao momba ny fiaramanidina toy izao manaraka izao:
1. Ny mpandeha rehetra tonga amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Entebbe dia iharan'ny fitsapana COVID-19, na inona na inona firenena niaviany na sata vaksiny.
2. Ny fanavakavahana ihany dia:
- Ankizy latsaky ny 6 taona.
- Ny mpiasan'ny fiaramanidina manana porofo momba ny vaksiny COVID-19 feno.
3. Ireo mpandeha izay manao fitiliana tsara ho an'ny COVID-19 amin'ny fahatongavana dia homena fanohanana ara-tsaina ary hafindra any amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny daholobe sy tsy miankina izay hitantana azy ireo mandritra ny fito andro ary havoaka amin'ny fitiliana PCR ratsy.
4. Ny fitsaboana ny mpandeha ao amin'ny (3) etsy ambony dia ho maimaim-poana eny amin'ny hopitalim-panjakana. Na izany aza, ireo mpandeha izay misafidy hopitaly tsy miankina dia hiantoka ny sarany.
5. Raha misy mpizahatany tonga, raha tsy misy soritr'aretina izy ireo na marary malemy, dia hokarakaraina ao amin'ny trano fandraisam-bahiny natokana ho an'ny mpizaha tany.
6. Ireo mpizahatany ao amin'ny (5) etsy ambony izay mandroso amin'ny aretina mafy dia hafindra any amin'ny hopitaly safidiny.
7. Ny mpandeha tonga dia handoa 30 dolara amerikana na mitovy amin'ny Uganda Shillings ho an'ny fitiliana PCR COVID-19.
8. Ny fandoavam-bola ao amin'ny (7) etsy ambony dia azo atao amin'ny Internet na rehefa tonga amin'ny alàlan'ny milina fivarotana, vola finday, na vola.
9. Ny mpandeha rehetra izay TSY mihoatra ny 37.5° C (99.5°F) ny hafanan'ny vatany, tsy manana kohaka maharitra, sahirana amin'ny fofonaina, na soritr'aretina mitovy amin'ny gripa hafa dia avela hiditra na hiala ao Ogandà.
10. Ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Entebbe Port Health dia manaiky ny fahatongavana na ny fiaingana ny taratasy fanamarinana fitiliana PCR COVID-19 ratsy atao ao anatin'ny 72 ora manomboka amin'ny fotoana fanangonana santionany. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fotoana fitaterana ao amin'ny tranoben'ny terminal.
11. Ireo mpandeha izay nanao vakisiny COVID-19 ary manana taratasy fanamarinana dia tsy maintsy mbola manolotra taratasy fanamarinana fitiliana PCR COVID-19 ratsy nalaina tao anatin'ny 72 ora manomboka amin'ny fotoana fanangonana santionany mankany amin'ny fiaramanidina. Izany dia satria tsy miaro 100% ny vaksiny, ary mila andro/herinandro maromaro ihany koa vao manomboka miaro.
12. Ireo mpandeha mivoaka ivelan'ny firenena dia tsy maintsy manana taratasy fanamarinana fitiliana PCR COVID-19 ratsy nalaina tao anatin'ny 72 ora manomboka amin'ny fotoana fanangonana santionany. Hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ny firenena haleha izy ireo.
13. Ireo mpandeha tonga amin'ny fotoanan'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, sy/na avy any amin'ny distrika any an-dafin'i Kampala miaraka amin'ny tapakilan'ny fiaramanidina manan-kery sy ny tapakila fidirana dia avela handeha any amin'ny hotely sy/na trano fonenany.
14. Ireo mpandeha miainga amin'ny fotoanan'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, sy/na avy any amin'ny distrika any an-dafin'i Kampala miaraka amin'ny tapakila fiaramanidina manan-kery dia avela handeha any amin'ny seranam-piaramanidina alehany amin'ny fanolorana ny tapakilan'ny mpandeha amin'ny manampahefana ho porofon'ny fandehanana any amin'ny seranam-piaramanidina.
15. Ny mpamily dia tokony hanana porofo fa avy any amin'ny seranam-piaramanidina izy ireo (toy ny tapakila fiantsonan'ny seranam-piaramanidina na tapakila mpandeha) mba hanatitra na haka mpandeha.
16. Ny fitaterana an-habakabaka ny taolam-paty ho any an-tanindrazana dia azo atao raha tanteraka ireto fepetra manaraka ireto:
- Taratasy ara-pahasalamana momba ny antony nahafaty.
- Tatitra momba ny fitsaboana na tatitra ara-pitsaboana feno avy amin'ny dokotera / tobim-pahasalamana.
- Taratasy fandrahoan-tsakafo (anisan'izany ny taratasy fanamarinana ho faty noho ny COVID-19).
– Kopia ny pasipaoro/taratasy famantarana ny maty (Ny pasipaoro/taratasin'ny dia/taratasy famantarana voalohany hatolotra ny tompon'andraikitry ny fifindra-monina) v. Fahazoan-dalana manafatra/manafatra avy amin'ny Tale Jeneralin'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana.
- Fonosana mety - fonosina anaty kitapo vatana tsy tantera-drano avy eo apetraka ao anaty vatam-paty misy zinc sy boaty metaly na hazo ivelany.
- Ny antontan-taratasy dia hohamarinin'ny fahasalaman'ny seranan-tsambo ary ny vatam-paty rehefa tonga dia hodiovina amin'ny fahasalaman'ny seranan-tsambo.
- Ny fandevenana ny fatin'ireo tra-boina amin'ny COVID-19 dia hatao araka ny fomba fiasa efa misy amin'ny fandevenana siantifika.
17. TSY MAINTSY mahazo avy amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny Raharaham-bahiny ny fandefasana taolam-paty eto amin'ny firenena.
Narahina haingana ny mpizaha tany
Laharam-pahamehana ny hanafaingana ny mpizaha tany toy izao manaraka izao:
Rehefa tonga dia hoentina eny amin’ny toeram-pivarotan-tsarimihetsika ireo mpizahatany izay handraisana ny santionany hanaovana fitiliana.
Avy eo izy ireo dia hiroso amin'ny fanamarinana any amin'ny Tourist Lounge izay hanatrehan'ny AUTO (Association of Uganda Tour Operators) sy ny UTB (Uganda Tourism Board), ary avela handeha any amin'ny hotely safidiny ao Entebbe.
Ny valin'izy ireo dia halefa amin'ny alàlan'ny mailaka na WhatsApp, arakaraka izay mety, ao anatin'ny 2 1/2 ora.
Tsy maintsy miandry eny amin’ny seranam-piaramanidina ny mpizaha tany amin’ny vokatra azony, mandritra ny 1 1/2 ora fara-fahakeliny.
Entanina ny mpizaha tany boky ho an'ny fitsapana azy ireo eto.